Nutrition – Page6– Healthy Life Journal
ကလေးအသက် ရှစ်လနဲ့ ကိုးလမှာ ဘာတွေကျွေးသင့်သလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကလေးအသက်ရှစ်လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးကို ဒိန်ချဉ်စတိုက်လို့ရပါပြီ။ ပြီးရင် နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စကျွေးနိုင်ပါပြီ။ ဘယ်လိုကျွေးမလဲဆိုတော့ ညနေသုံးနာရီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးကို ဒိန်ချဉ်လေးတစ်ဇွန်းကို ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းကျွေးရင်ရပါပြီ။ ဒိန်ချဉ်ကိုတစ်ပတ်မှာသုံးရက် (ဥပမာ- တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာစသဖြင့်) စတင်ကျွေးလို့ရပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ချိစ်ဒိန်ခဲလေးတွေကိုလည်း...
၇လအရွယ် ကလေးငယ်ကို ဘယ်လို အစာတွေ ကျွေးရမလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၇လရောက်ပြီဆိုရင် ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ဖြည့်စွက်စာကို လေးကြိမ်ကနေ ငါးကြိမ် ကျွေးပါပြီ။ မနက်ရှစ်နာရီမှာ ဖြည့်စွက်စာကျွေးတယ် ဆိုရင် ၁၀ နာရီမှာ မနက်ခင်း သရေစာအနေနဲ့ ငှက်ပျောသီးကျွေးတာမျိုး စကျွေးလို့ရပါပြီ။ ၇လအရွယ်မှာ ငှက်ပျောသီး၊ ပန်းသီး၊ သင်္ဘောသီးစတဲ့...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး. ကလေးမွေးပြီး မိခင်တွေက ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေ အထူးလိုအပ်ပါသလဲ။ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ စားသောက်ပေးသင့်ပါသလဲ။ ဖြေ. ကလေးမွေးပြီးကာစ မိခင်တစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာ ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်က ၂၅၀ဝ ကယ်လိုရီနဲ့ ၃၀ဝ၀ ကယ်လိုရီအကြားဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို မိခင်နို့ချိုတိုက်ပြီးတိုင်း ကယ်လိုရီပိုစားဖို့လိုပါတယ်။...
စူပါမားကတ်မှာ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ ဈေးဝယ်တတ်စေရန်
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) စူပါမားကတ်တွေမှာဈေးဝယ်ရတာက ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အမျိုးအစားကို အေးအေးဆေးဆေး ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်တာကြောင့် အဆင်ပြေလှပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အခုခေတ်အိမ်ရှင်မအများစုဟာ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်လောက် စူပါမားကတ်ကိုသွားကာ အစားအသောက်တွေကို ဝယ်ယူလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတလောမှာ စူပါမားကတ်က အစားအသောက်တွေဝယ်ပြီး...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး။ ။ ချင်း(ဂျင်း)စားပေးရင် တုပ်ကွေးမဖြစ်လွယ်ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ မှန်ပါသလား။ ဖြေ။ ။ အခုလို တုပ်ကွေး၊ အအေးမိဝေဒနာ အဖြစ်များတဲ့ ရာသီမှာ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း(ဂျင်း)စတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်လေးတွေကို များများစားပေးသင့်ပါတယ်။ ချင်း(ဂျင်း)ကလည်း ကိုယ်ခံအားတက်စေ...
အဆင်သင့်စာကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေဖို့
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အဆင်သင့်စာကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု အန္တရာယ်လျော့ကျစေဖို့ရာအတွက် လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကိုအမေရိကန်နှလုံးအသင်းက အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ (၁) ဖြစ်နိုင်ရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကိုသာ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်စားသောက်ပါ။ (၂) အဆင်သင့်စာကို စားမယ်ဆိုရင် အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ ပမာဏကိုပဲ...
ကင်ဆာ ကာကွယ်ပေးမည့် သဘာဝအစာ ၁၂ မျိုး
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်တွန်းလှန်ပေးနိုင်တဲ့ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်နဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို စားပေးနိုင်ဖို့ ကင်ဆာတားရာမှာ ထိပ်တန်းသဘာဝ အစာ ၁၂ မျိုးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့် ပန်းဂေါ်ဖီပွင့် ဂေါ်ဖီမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ...
၄၀ကျော် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့အတွက် အထူးလိုအပ်သည့် အာဟာရ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အသက် ၄၀ ကျော်လာပြီဆိုရင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒူးနာတာနဲ့ ဝတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ် အသက် ၄၀ ကျော်လာပြီဆိုရင် အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ ဘယ်လိုဝေဒနာ စဖြစ်သလဲဆိုတော့...
ရေ၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ကောင်းကျိုးကိုးသွယ်
၊ လရိပ်မေ ၊ ရေကို အလုံအလောက် သောက်တာကြောင့် အောက်ပါ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ကောင်းကျိုးကိုးမျိုးကို ရရှိစေပါတယ်။ (၁) ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေခြင်း ရေမှာ အဆီ၊ ကယ်လိုရီ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ သကြားဓာတ် လုံးဝ မပါရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရေသောက်...